साफ सुजुकी कपमा नेपालको अबको खेल कस्तो रहला ? यसो भन्छन् प्रशिक्षक महर्जन | Sagarmatha TVSagarmatha TV साफ सुजुकी कपमा नेपालको अबको खेल कस्तो रहला ? यसो भन्छन् प्रशिक्षक महर्जन | Sagarmatha TV
इन्जुरी समयमा सम्हालिन नसक्दा अंक गुम्यो
काठमाडौं । बंगलादेशमा मंगलबारबाट शुरु भएको साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले पाकिस्तानसँग पराजित भएको छ । मोहम्मद अलीले इन्जुरी टाइममा गोल गरेपछि पाकिस्तानले नेपाललाई २–१ ले पराजित गरेको हो । पाकिस्तानका लागि इन्जुरी टाइमको पाँचौ मिनेटमा अलीले निर्णायक गोल गरेका हुन् ।
ढाकास्थित बंथबन्धु नेशनल स्टेडियममा भएको खेलको ३६ औँ मिनेटमा हसन बसिरले पेनाल्टीमा गोल गर्दै पाकिस्तानलाई पहिले अग्रता दिलाएका थिए । पहिलो हाफमा १–० गोलले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि बराबरी गोल गर्न ८२ औं मिनेट कुर्नुपरेको थियो । ८२ औं मिनेटमा निराजन खड्काको पासमा विमल घर्तिमगरले नेपालका लागि बराबरी गोल गरेका थिए । निराजन नबयुग श्रेष्ठलाई रिप्लेस गर्दै मैदान आएका थिए । तर अन्तिम समयमा नेपालले आफूलाई सम्हाल्न नसक्दा पराजित हुन पुग्यो । पाकिस्तानका लागि मोहम्द अलिले खेल सकिन केही सेकेण्डमात्र बाँकी रहेका बेला निर्णायक गोल गरे ।
निर्धारित समय भरि नेपालले एउटा मात्रै पहेँलो कार्ड पायो भने पाकिस्तानले २ वटा पहेँलो कार्ड पाएको थियो । नेपालले अब विहीबार भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । नेपालको लागि डिफेण्डर सुमन अर्याले यसै खेलमार्फत राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरेका हुन् । उपाधि जित्ने लक्ष्य सहित साफ च्याम्पियनसिप खेल्न बंगलादेश पुगेको नेपाली टोलीलाई पहिलो गासमै ढुंगा लागेको छ । अतिरिक्त समयमा नेपालली खेलाडीहरु सम्हालिन नसक्दा पाकिस्तानलाई २–१ को नजिता सुम्पिन बाध्य बनेको हो ।
यसैबीच, नेपाली राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले पाकिस्तानसँग खेल हारेपछि नचाहँदा नचाहँदै पहिलो म्याच पाकिस्तानलाई सुम्पिन बाध्य भएको बताएका छन् । उनले भने ‘फुटबलमा यस्तो हुन्छ । हामीले यसका गल्तिलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने हो । आजको खेलमा जुन २ वटा चिज नगर्नु पर्ने थियो त्यो गरेर हामी पराजित भयौं । उनले डिफेन्समा सुरधारको खाँचो रहेको बताए । ‘डिफेन्समा गल्ती गरेका छौं, त्यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । आज हामीले पाएका अबसरलाई पनि सदुपयोग गर्न सकेनौं । आजको खेल हार्दैमा हामी प्रतियोगितबाट बाहिरिसकेका छैनौं । अब बाँकी रहेका दुई वटै खेलमा जित निकालेर सफल हुने ठाउँ पनि छ ।’
उनले पहिलो खेलमा पराजयको समिक्षा गर्दै आगामी खेलको रणनीति बुन्ने बताए । पहिलो खेलमा पराजय भएसँगै नेपाललाई अबका खेलमाज जसरी पनि शतप्रतिशत नतिजा निकाल्नुपर्ने दबाब बढेको छ । पहिलो खेलमा १ अंक मात्र जोड्न सकेको भए पनि आगामी खेलमा सहज हुने अवस्था थियो । अन्तिम ३० सेकेण्डमात्रै सम्हालिन नसक्दा पाकिस्तान ३ अंक बटुल्न सफल भएको हो ।
यसैबीच, मंगलबार नै भएको अर्को खेलमा आयोजक बंगलादेशले विजयी शुरुवात गरेको छ । ढाकास्थित बंगबन्धु रंगशालामा मंगलबार साँझ भुटानलाई २–० ले हराउँदै बंगलादेशले विजयी सुरुवात गरेको हो । समूह ‘ए’मा बंगलादेश र पाकिस्तानले समान ३ अंक जोड्दै सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावनालाई बलियो बनाएका छन् । नेपाल र भुटान अंक बिहिन छन् । बिहीबार नेपाल र भुटानबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । अर्को खेलमा बंगलादेशले पाकिस्तानको सामना गर्नेछ । ७ राष्ट्रिको सहभागिता रहेको साफ च्याम्पियनसिपको समूह बीमा भारत, माल्दिभ्स र श्रीलंका रहेका छन् ।